सचिन तेन्दुल्कर नेपाल आउँदै…
पाेखरा २० कात्तिक- भारतका पूर्वक्रिकेटर सचिन तेन्दुल्कर नेपाल आउने भएका छन्। सचिन युनिसेफको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि नेपाल आउन लागेका हुन्। युनिसेफको सद्भावना दूत रहेका सचिन आगामी नोभेम्बर १६ मा नेपाल आउने लगभग पक्का भएको स्रोतले दाबी गरेको छ। १६ तारिखमा सम्भव नभएमा २० वा २२ तारिख आउने गरी कुराकारी भइरहेको छ।
उनी युनिसेफ नेपालको पोषणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। स्रोतका अनुसार सचिन त्यही दिन भारत फर्कने कार्यक्रम छ।सचिनले २०७२ को भूकम्पको बेलामा नेपाललाई सहयोग गरेका थिए। त्यसपछि उनी कुनै एक कार्यक्रममा नेपाल आउन चाहेका
थिए। विश्व क्रिकेटका कीर्तिमानधारी ब्याट्सम्यान सचिन नेपाल आउँदा नेपालका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी भने स्वदेशमा हुनेछैनन्।
यो बीचमा नेपालले बंगलादेशमा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स कपमा सहभागिता जनाउँदैछ। यस्तै, नेपालका पूर्वकप्तान पारस खड्का र सन्दीप लामिछाने यही समयमा टी-२० खेल्न युएई जाँदैछन्। पारस नोभेम्बर ११ र सन्दीप नोभेम्बर १२ मा युएई जाँदैछन्। पारस पनि युनिसेफ नेपालका सद्भावना दूत हुन्।
युनिसेफले पारस र सचिनलाई एउटै मञ्चमा राखेर कार्यक्रम गर्न चाहे पनि टी-१० लिगका कारण सम्भव नहुने भएको छ। यसअघि २०६९ असार १ मा भारतका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनी नेपाल आएका थिए। दुई दिने भ्रमणका दौरान धोनीले केही घन्टा कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा बिताएका थिए। धोनीले होटल याक एन्ड यतीमा नेपाली क्रिकेटप्रेमी र प्रशंसकसँग क्रिकेटका विषयमा संवाद समेत गरेका थिए।
निश्चलले स्वस्तिमालाई भने- अँ, लियौ ,गर्‍यौं, राम्रै गर्यौं।
उनको यो भनाइ सिनेमा नहेरेपनि आफ्नी श्रीमती तथा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको ‘बुलबुल’बाट प्राप्त गरेको सफलताप्रति लक्षित थियो। यो सिनेमाको प्रस्ताव आउँदा निश्चललाई स्वस्तिमाले सोचे जस्तो गर्लिन लागेको थिएन। उनलाई डर थियो-अलिकति तलमाथि भयो भने त ध्वस्त हुन्छ। सिनेमा बनिसक्दा गज्जब नै बन्यो। रिलिजपछि सिनेमाले ताली पायो, स्वस्तिमाको हात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको राष्ट्रिय पुरस्कारले सजियो।
‘बुलबुल’ स्वस्तिमाले रोजेको खतरा थियो। रोजाइ उपलब्धिपूर्ण रह्‍यो। पछिल्लो समय निश्चल-स्वस्तिमाको अभिनयमा व्यस्तता राम्रै छ। उनीहरू दुबै शुक्रबारबाट एकसाथ पर्दामा आउँदैछन्-साली-भेना बनेर। ‘घामड शेरे’ सिनेमामा उनीहरूको साली-भेनाको जोडी सिनेमामा कस्तो देखिएला? दर्शकलाई एउटा स्वभाविक कौतुहल्ता छ। सिनेमालाई लिएर उनीहरू उत्साहित छन्। उनीहरूलाई सिनेमाले ‘राम्रो गर्छ’ भन्ने राम्रो आशा छ। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनीहरू यस्तो सुनिए।
* सिनेमाको पहिलो प्रस्ताव कसलाई आएको थियो?
निश्चलः मलाई। हेमराजले धेरै अगाडि सँगै सिनेमा गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो बेला उसले एउटा प्रेमकथा गर्ने बताएको थियो। उसले जस्तो प्रेमकथा गरिरहेको छ, त्यस्तै भए त मैले गर्दिन भनेर उसलाई भनेको थिएँ। फरक भए गरूँला भनेर बसेको थिएं। हेमराजलाई चित्त बुझेन भने गर्दिन है पनि भनेको थिएँ। यसरी म प्रेमकथाको आशामा बसिरहेको समयमा उसले ‘घामड शेरे’को कथा लिएर आयो। कथा सुनेपछि मलाई नयाँ लाग्यो।
मैले उसलाई नयाँ किसिमको रहेछ त्यसमाथि तिमीले बनाउने भएपछि पक्कै पनि नयाँ आउँछ भनेर उत्साहित बने। स्वस्तिमाः मलाई त यो सिनेमा धेरैपछि प्रस्ताव गरिएको हो। पहिलादेखि नै उहाँ (निश्चल बस्नेत) सिनेमामा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो । स्क्रिप्ट भएर वर्कसप हुँदाहुँदै धेरैपछि मलाई खेल्न भनिएको हो।
* सिनेमा गर्न तयार हुनुको कारण के हो?
निश्चलः उसले मलाई एउटा आइडिया सुनाएको थियो। सुन्दा रमाइलो पनि थियो र हिन्दी सिनेमासँग मिलेको जस्तो पनि लाग्यो। मैले त्यो कुरा भने। उसले त्यसपछि अगाडिको कथा सुनायो। सुनेपछि मलाई मजा आयो, पात्र पनि गज्जब लाग्यो। रोमान्टिक हिरो बनाउँछु भनेको मान्छेलाई यो घामड बन्न पाउँदा ठिक लाग्यो।
स्वस्तिमाः सुरूमा गर्दिन भनेको थिएँ। पात्र खासै मनपरेको थिएन। सिनेमामा मेरो पात्र दोश्रो तहमा छ, कथा पनि ठीकै लागेको थियो, कताकता ‘ओ माई गड’सँग मिलेको जस्तो पनि लागेको हो। सुन्दै गएपछि ठीकै लाग्यो। म मेरो र निश्चलको सिनेमा एकसाथ आउँदा केहि फरक होस् भन्ने चाहन्थे।
* सुटिङमा निश्चलजी को-एक्टर बढी देखिनुभएको थियो कि निर्देशक?
स्वस्तिमा- को-एक्टर। मैले निर्देशकको पाटो अझै देख्न पाएको छैन। निश्चल- हा हा,अर्काको सेटमा पनि आफू डाइरेक्टर बन्न कहाँ सकिन्छ र? मैले सिनेमा गर्नु अगाडि र सुटिङमा अभिनेताको हिसाबले १-२ वटा सुझाब दिने गरेको छु नत्र दिन्न।
* सिनेमामा ‘घामड शेरे’को कस्तो व्यक्ति हो?
निश्चल- यो सेतोलाई सेतो र कालोलाई कालो भन्ने पात्र हो। सिधा हिसाबको कुरा गर्छ। हाम्रो समाजमा जे चिज छ, त्यही कुरा सिनेमामा छ। जस्तो जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्नुपर्छ सबलाई थाहा छ। फोहोर जता पायो त्यतै फाल्न हुन्न, त्यो पनि थाहा छ, थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले यो गरिराखेका हुँदैनौं। तर शेरे जे सहि हो त्यो गर्छ। त्यो गर्दा अरूका नजरमा ऊ अप्ठ्यारो मान्छ जस्तो लाग्छ र घामड जस्तो हुनपुग्छ।
* अनि आफ्नो? स्वस्तिमाः सुर्खेतको केटीको भूमिका छ। अंग्रेजी पढाउने, घामड शेरेको साली।
* कस्तो रह्‍यो त साली-भेनाको केमिस्ट्री?स्वस्तिमा- कस्तो देखियो त सिनेमा हेरेपछि थाहा होला। राम्रो भएको छ। दर्शकले रमाइलो मान्नुहुनेछ। निश्चल- जे होस् पासचाँहि भइन्छ।
* घामड शेरे बन्न कति समय लाग्‍यो?
निश्चल- मैले गरेका सिनेमामा म त्यति फेरिएको देखिन्न, उस्तै-उस्तै देखिएको छु। यसमा फरक छ। हेर्दा म निश्चल भनेर होइनकी घामड शेरेका रूपमा देखियोस भन्नेमा सचेत थिएँ। स्वस्तिमाले मेरो हेयर स्टाइलमा सुझाव दिएको थियो। देखाउने चिज त भयो नै भित्रबाट कसरी शेरे बन्ने? भन्दा हेमराजले १-२ वटा चिज तिमीमा पहिले नै छ, बाँकी कुरा मिलाउनुपर्नेछ भन्‍यो। ती १-२ वटा अरू चिज मिलाउनका लागि आफ्नो मनस्थिति तयार पारे।
पछिल्लो समय मैले आफूलाई एक्टरको रूपमा सोच्ने कोशिस गर्न थालेको छु । मलाई याद छ, पहिला-पहिला सिनेमा गर्दा म संवाद मात्र रटिरहेको हुन्थे। जे संवाद दिएको हुन्थ्यो त्यही रटेर आफ्नो तरिकाले बोलिरहेको हुन्थे। अबचाँहि यसरी अभिनेता बन्ने होइन भन्ने अनुभव हुँदै गइरहेको छ। म अब पात्रको परिस्थितिमा बसेर, म त्यहाँ त्यो पात्र बन्दा के गर्छु त भनेर तयारी गर्न थालेको छु। पछिल्लो समय ‘प्रसाद’मा मैले गरेको काममा म बाट केही कोशिश भयो जस्तो लागेको थियो। यसपटकमा त्यो कोशिश अझ बढी गरेको छु। प्रि-प्रोडक्सनदेखि सुटिङसम्म जाँदा मैले एक-डेढ महिनाको समय तयारी गरें।
* स्वतिमालाई कति समय लाग्यो?
म कहिले पनि पात्रमा छिर्दिन। पात्रलाई बुझ्ने प्रयास गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्छु कस्तो होला भनेर। एकदमै ठूलो भयंकर, समय लगाएर गर्नुपर्ने केही थिएन। तर अलिकति लवजमा ध्यान दिएको छु। म प्रि-प्रोडक्सनदेखि बस्न पाएको पनि होइन। एक किसिमले लगभग अन्तिममा नै जोडिए। त्यो बेलामा म अर्कै सिनेमाको प्रचारमा व्यस्त भएकाले खासै केहि गर्ने समय नि भएन। मैले मानसिक रूपले मात्र आफूलाई तयार पारे। सुर्खेतको साथीहरूबाट उनीहरूको बोलचालीको शैली टिप्ने कोशिस गरें अरू त त्यस्तो भयंकर केहि गरिन।
* एकले अर्कालाई अभिनेता-अभिनेत्रीका हिसाबले मूल्याकंन गर्नुपर्‍यो भने?
निश्चल- (हाँस्दै) अहिले इन्टरभ्यू दिएर भरे बेकारमा गाली खाने बाटो नबनाऔं होला। राम्रै गरिरहेको छ। हेरेक सिनेमामा सुधार देखिन्छ। कहिलेकाही सिनेमा जस्तो गरे पनि आफ्नो कामचाँहि छुट्टिनेगरी गर्न सकिन्छ, त्यो ख्याल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले उसको धेरै सिनेमा हेरेको छैन। ट्रेलरहरू हेर्दा नै फरक छ छैन थाहा भइसक्छ। त्यो बेला यो किन यसरी गर्‍या होला? भन्ने त हुन्छ तर म त्यति धेरै सल्लाह दिइराखेको हुँदिन।
स्वस्तिमाः मैले चिनेको उहाँलाई निर्देशकका रूपमा हो। त्यसकारणले गर्दा निर्देशकले उहाँको अभिनेताको पाटोलाई जहिले पनि छायाँमा पार्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भन्दा भन्दै पनि आजकल क्यामरा अगाडि उहाँको शारिरिक हाउभाउ क्यामरा मैत्री भएको देख्छु। सुरूमा ‘कबड्डी’ हेर्दाचाँहि राम्रा-राम्रा कलाकरको भीडमा अलिक अर्कै भने लागेको थियो। अहिले केहि सुधार भएको छ, स्क्रिनमा स्वभाविक देखिन थालेको छ।
स्वस्तिमाको कुरा सुनेपछि
निश्चलः केही टिप्स पाउन भन्छु देको होइन। बेस्ट एक्टरका लागि केही टिप्स देउन त।
स्वस्तिमा- पाएको कुरा(निर्देशन) छोडेर एक्टिङमा आएपछि कहाँबाट हुन्छ त अनि।
आफ्नो निर्देशनमा कहिले हो स्वस्तिमालाई एक्सन-कट भन्ने?
निश्चल- मुख्य कुरा स्क्रिप्ट हो। त्यसमाथि उसले मलाई निर्देशकको रूपमा गन्छ जस्तो नि लाग्दैन। मलाई मेरो श्रीमती हो, भर्खरको छ लाग्ने अनि अलिक पाको भूमिका अफर गर्नै डर लाग्ने। आफ्नो श्रीमती भएर लियो की वा नसुहाउने होकी भन्ने भइराख्ने। सायद धेरै नजिक भएर पनि हो की? त्यही अप्ठयारो लागेर पनि होला। उमेर अनुसारको परिपक्वता देखिदैन की भन्ने मलाईचाँहि भइराख्छ। उसलाई त मैले उमेर भन्दा सानै देखिरहेको हुन्छु नि त ।
स्वस्तिमा- अस्ति त मलाई सबैले योङ भन्छ भन्दा त ‘भन्छ तँलाई योङ भन्या होइन त?’
निश्चल- मैले त क्यारेक्टरलाई पो भनेको त। बुलबुल हेरेपछि ऊ चुनौती दिन सकिने अभिनेत्री लाग्‍यो कि लागेन त?
स्वस्तिमाः बुलबुल गर्नेबेलामा पनि उहाँलाई त्यो रोल मलाई सुहाउँदैन लागेको थियो।
निश्चल- सिनेमा त हेरेको छैन। ‘बुलबुल’को ट्रेलर हेरेपछि लाग्‍यो। उसलाई चिनेको तरिका आफ्नो ठाउँमा छ। गर्‍यो भने त्यो सिनेमा उसको सिनेमा हो भन्ने थाहा थियो। यो सही तरिकाले गरेका राम्रो चिज हो भन्ने लागेको थियो तर अलिकतिमात्र तलमाथि भयो भने त त्यो चिजले एकदमै ब्याकफायर गर्ने खतरा थियो। मलाई त्यसैको डर थियो।